WAY တဲ့။ ဒီကနေ့ ကုန်တိုက်တခုရောက်တုန်း စာအုပ်စင်မှာ တွေ့ရတာပါ။ ဒီမဂ္ဂဇင်းက ထိုင်းလို ထုတ်တာပါ။ ဘာအကြောင်းအရာတွေ ပါမှန်း မသိဘူး။ မျက်နှာဖုံးက ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါမှ အွန်လိုင်းမှာ ရှာကြည့်မိတယ် -
တွေ့ပြီ - http://www.facebook.com/waymagazine
ပုံတွေ လိုက်ကြည့်တော့ ချန်တောင်းဓာတ်ပုံတွေ့တယ်။ ထိုင်းစာတွေလည်း တွေ့တယ်။ ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်စက်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီး ပေါ်လာတာတွေကို ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
หลังการลงโรงฉายของภาพยนตร์ The Lady ว่าด้วยเสี้ยวชีวิตหนึ่งของ ออง ซาน ซูจี บรรยากาศการเมืองในพม่าเกิดการเปลี่ยนแปลง มีสัญญาณการหยุดยิง ยุติสงครามกับชนกลุ่มน้อย นักโทษการเมืองถูกปล่อยตัว แต่ 'จ๋ามตอง' สมาชิกเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ (ฉาน) ที่นิตยสารไทมส์ ยกให้เป็น 1 ใน 50 ฮีโร่ของเอเชีย ยังไม่แน่ใจว่านี่คือยาพิษเคลือบน้ำตาลหรือเปล่า
5Qs / The (Chan) Lady / WAY 47
Life after the screening of the film, The Lady withafraction of the life of Aung San Suu Kyi, Burma's political climate has changed. With the cease-fire End the war on minorities. Political prisoners were released, but the comments on must be the "User's network operator Shan (Shan), the Times quoted the magazine as one of Asia's 50 heroes. Not sure if this is not sugar-coated poison.
5Qs / The (Chan) Lady / WAY 47.